LANDA I-IRIS F-20 Tigershark FSX & P3D - Rikoooo
Usayizi 152 MB
Play 25 251
I IRIS F-20 Tigershark is a yokuhumusha entsha kumnandi of omunye IRIS imikhiqizo bokuqala. Ekuqaleni ezenzeka emuva 2004, le nguqulo entsha ye Tigershark kuhambisana brand new look.
Remodelled kusukela phezulu kuya phansi kanye featuring brand new indiza Sokuzenzela, alalelwayo futhi abanikeze asebenza nabo entsha virtual, lo mkhiqizo lwakhiwe for flat out, kumnandi full mpintsha!
Indiza lwakhiwe njengoba 'kuthiwani uma' umkhiqizo, ngokusekelwe azungeze umqondo F-20 ukube baya service.
Ama-pixel we-2048x2048 we-pimel bitmap ashiyele kuma-pixel we-1024x1024 kuwo wonke ama-paintchemes ahlinzeka ngama-bumpmaps abukhali nokubonakala okumangazayo kuwo wonke amakhadi we-Grafikhi akwazi ukusebenza FSX!
A unique Ordnance Manager ukuvumela ukuba ukhethe ukuthi yini ordnance ufisa ukuba baphathe at umyalo wakho.
I-soundset enhle kakhulu evela kuTradbine Sound Studios enezandi ze-360 degree panning ezenziwe ngokwezifiso ze FSX.
A choice of paintschemes oncomekayo phezu eziyishumi nambili abasebenzisa the best art amasu etholakalayo kokuvumela weathering emihle ukucaciseleka ezibukwayo onobuhle ezinhlanu ezikhethekile ezibukwayo.
A oncomekayo imodeli flight yakhelwe kusukela emhlabathini kuze ukukunikeza esitebeleni futhi kumnandi fly airframe abazokwazi izivinini Mach 2 +.
iphuzu 3D Ngokugcwele vectoring qeda on the F-20 Agile ne ezihambayo 3D afterburner!
An in ukujula pilot ibhukwana lonke ulwazi oludingayo ukuze ukwazi ukusebenzisa izinhlelo IRIS F-20 Tigershark futhi izindiza ephelele nge instrumentation ukuwohloka, tinhla tekutikhumbuta kanye nokunye.
Isiqophi F-20 Tigershark - Grand Canyon Formation Flying